UVICTORINOX SKIPPER NAVY CAMOUFLAGE KUNYE NESWITZERLANDTOOL SPIRIT XC UPHONONONGO - IZIXHOBO
UVictorinox Skipper Navy Camouflage kunye neSwitzerlandTool Spirit XC uphononongo
Uzalelwe kwiminqweno kaKarl Elsener yokwenza imela ebumbeneyo enemisebenzi ebonakalayo, inkampani esiyaziyo namhlanje njengoVictorinox wazalwa ngo-1884 Ibach-Schwyz.
Imveliso yale nkampani iya kwamkelwa kwilizwe liphela njengeSwiss Army Knife.
Ukwenza isixhobo semisebenzi emininzi akwanelanga kuVictorinox; baseta izinto zabo ngaphandle komgangatho okhethekileyo oya kuhlala ixesha elide. Abapheleli nje ekuveliseni iimela kunye namacephe okusika kodwa benza nezinye izinto ezininzi ezinjengemithwalo, ukubukela ukubola kwanokwenza iziqholo zabo. Uyilo lwabo luyaziwa kubantu abaninzi kwihlabathi liphela njengeempawu zeshishini.
Ngokusetyenziswa kwemihla ngemihla kunye neemeko ezigwenxa, uVictorinox iimela kunye neemveliso zisebenza. Ukusuka kubungcali ukuya kubucala babucala, ubomi obungenakubalwa buxhomekeke ekusebenzeni ngempumelelo kwezixhobo zabo. Uninzi luyalazi kwaye luyathemba igama likaVictorinox kungekuphela komgangatho, kunye nodumo lokugqwesa ecaleni kokuthembeka kwabo abakumgangatho wehlabathi.
Ukuyilwa kwezinto kukwangumba ophambili weVictorinox. Ukusukela oko baqala ngaphezulu kweminyaka eyi-100 eyadlulayo, bebetshintsha indlela abantu abazijonga ngayo iimela ezisebenza ngeendlela ezininzi. Zonke iimveliso ngaphandle kwelayini yokuhamba kwazo ziveliswa ekhaya eSwitzerland.
Inkampani, uVictorinox AG yinkampani yosapho. Ubunini benkampani buhlala kwi-90% yeVictorinox Foundation. Oku kulingana ukugqibezela ulawulo kunye nokufikelela kwiipesenti ezingama-90 zenzuzo yokutshala kwakhona okanye ukuhambisa ngaphakathi kwenkampani-iqhinga elinobuqili elijolise kubomi obude obuzinzileyo.
Sizamile, kwaye intsimi yavavanya iziqwengana ezimbalwa zoluhlu lwazo, kwaye asinakukunceda kodwa siqaphele ubuchwephesha obumangalisayo obusitsalele kwiVictorinox kwasekuqaleni. Ukususela ekugqityweni kwesinyithi ukuya ekusebenzeni nasekuhambeni, yonke into yenziwe ngokuchanekileyo. Jonga apha ngezantsi ngombono oneenkcukacha malunga noko besikucinga ngeVictorinox Skipper yabo yamva nje kwiNavy Camouflage kunye neSwitzerlandTool Spirit XC izixhobo ezininzi.
Ifumaneka kwipateni entsha yokufihla i-navy okanye eluhlaza okwesibhakabhaka
Ukuphakama kwe-intshi eyi-0.9
6.4 oz. ubunzima
Ukwakhiwa kwesikali seABS / Cellidor
Izixhobo ezithile zoomatiloshe
Izixhobo: I-blade enkulu enokutshixwa nge-wavy, i-bottle opener, i-5mm screwdriver, i-wire stripper, i-shackle opener, i-marlin spike, i-opener, i-3mm screwdriver, i-reamer / i-punch, i-corkscrew, i-Philips screwdriver, iipleyiti, umsiki wocingo, isixhobo sokucofa ucingo , ii-tweezers, i-toothpick, iringi ephambili, kunye ne-lanyard.
zibi kangakanani iitattoo kubambo lwakho
I-SwissTool Spirit XC
I-Swiss yenziwe, ukwakhiwa kwentsimbi engenasici
Kuquka ingxowa yokukhusela isikhumba
Ukuphakama kwe-intshi ye-0.7
4.1 intshi intshi
Ukukhanya 7.4 oz. ubunzima
- Izixhobo: iipleyiti ezineenaliti, umsiki wocingo (usika intambo encinci / ethambileyo ukuya kuthi ga kwi-40 HRC), umsiki wocingo oluqinileyo, isitshixo esikhulu se-wavy, blade screwdriver, reamer / punch, multipurpose hook, can opener, 4mm screwdriver, bottle Isivulisi, iscrewdriver esiyi-6mm, isityuli sekhreyithi, isinyithi, isikere, isarha yomthi, isarha yesinyithi, ifayile yesinyithi, iscrewdriver esingu-2,5 mm, isisele esi-7mm, isitshisi, ucingo olusahluliweyo, ucingo olutshintshayo
Yiba nomfanekiso wakho uhamba ngolwandle ulwandle kwakhona.
Impelaveki ephumlileyo isenza into othanda ukuyenza. Ngoku khawufane ucinge ukuba uza kungena kwela qhinga lingenakuphepheka elisongela ukonakalisa yonke imini yakho, okanye ubuncinci uthathe ii-minuets ezilungileyo ezingama-20 zexesha elibalulekileyo lokuphumla. Le yinto yonke oomatiloshe abajongana nayo kodwa ayinakubangela ingxaki kwimizuzwana ukuba uneSkipper epokothweni.
Njengabasebenzi bebhodi yeenqanawa, esi sixhobo sincinci sinokwenza zonke iintlobo zemisebenzi ngaphezulu kwe-15 yeempawu ezahlukeneyo zokuhamba ngolwandle njenge-marlin spike, i-opener shackle opener kunye ne-reamer.
Ukuhamba ngomkhumbi yinto enjalo. Inxalenye yento eyenza kube mnandi kakhulu kukwazi ukuba nantoni na enokwenzeka. Ngamanye amaxesha, ezo zimanga zinganobungozi. Ngokukodwa ukuba awunazo izixhobo ezifanelekileyo kunye nezixhobo. ISkipper sesinye sezixhobo ezinokuthi ngokuqinisekileyo sigcine usuku. Ibhleyidi enkulu inomphetho we-beveled onokuthi usike ngentambo eshinyeneyo. Kukho isixhobo sokucoca ucingo kunye nesixhobo sokukrola esiza ngokufanelekileyo kumaxesha angaqhelekanga. Kukho i-bevy yezixhobo ezisebenzayo ezinje nge-toothpick, i-tweezers, kunye ne-opener.
Ukuqonda ukuba le yimela yeepokotho yeyona nto kunzima ukuyazi. Ngaphandle kobungakanani beescrewdriver ezimbini zePhillips, iipleyiti kunye nokuvula ibhotile, le nto inobunzima nje obumalunga nee-ounces ezintandathu ukuphakama kwee-intshi ezi-0.9. Ngee-intshi ezine kuphela, ilingana kanye entendeni yesandla sakho ngokulula. Akukho buninzi epokothweni yakho nokuba.
Ubunzima bayo obucekeceke kunye nokugqibezela kwe-navy camouflage kuyenza ifashoni nayo. Okokugqibela, ine-lanyard kunye nomsesane wesitshixo ukwenza ukuba kube nzima kabini ukulahleka. Yimela elula enokusetyenziswa okunzima okuninzi. Kuninzi njengokuhamba ngomkhumbi.
UVictorinox SwissTool Womoya XC uphononongo
igumbi elincinci lokuhlamba iimpahla imibono
Ayizizo ii-Scouts kuphela ezizifumana zifuna imela yeenjongo ezininzi, kodwa zihlala zizo kuphela ezinazo kwimeko engxamisekileyo. Isixhobo seSwitzerland soMoya XL yenye yeemela emva kokuba ufumene, awunakufumanisa ukuba wakhe waphila njani ngaphandle kwaso. Ngaphezulu kweempawu ezahlukeneyo ezingama-26, akukho nto ingako inokuyenza le nto.
Ndiyithengile le thayi njengesipho, kodwa ngengozi kuye kwafuneka ndiyisebenzise. Kwakucace gca ukuba wonke umntu okwiplanethi kufuneka abe neyakhe. Ingasetyenziselwa emsebenzini okanye ekhaya kwimisebenzi eyahlukeneyo.
Isixhobo se-Swiss Tool Spirit XL ikwayimela efanelekileyo kuyo nayiphi na into oyithandayo. Ukuloba, inkampu, ukuhamba ngomkhumbi, kunye nokuhamba intaba yimizekelo emihle yemisebenzi yangaphandle apho esi sixhobo sincinci sinokuhlala siluncedo. Iimpawu ezinje ngobukhulu obahlukeneyo beziscrewdrivers, zombini iisarha zentsimbi kunye neenkuni, isisele kunye neepleyiti ezineenaliti zithatha umsebenzi kuwo wonke umsebenzi.
Ukufumana iinkuni zomlilo kuba lula kunokuba bekulindelwe. Ukubeka isikhephe semodeli, ukulungisa i-drone oyithandayo, okanye ukubetha impempe epholileyo kwenziwa kwi-snap. Umsiki wocingo ude asike iintlobo zetyeyisi ezixineneyo. Ngoku iluncedo.
Ngokubanzi, le yimela enokujongana nawo nawuphi na umsebenzi, nokuba usemsebenzini, ekhaya, okanye ngelixa udlala. Nge-ounces ezisixhenxe ezinqabileyo, awazi ukuba uyayiphatha, nto leyo emangazayo xa ujonga zonke izinto eziquletheyo. Yonke imisebenzi engama-24 ilungelelene ngokuqinileyo ukugcina indawo kodwa isilayida ngokulula. Yenziwe yiSwitzerland kwaye umgangatho awunakulinganiswa.
Ukuyikhupha yonke le nto, iza nengxowa yesikhumba yodidi ukuyigcina kwaye uyigcine ikhuselekile kwimikrwelo nakumonakalo. Akukho kulahleka ngale mese yomkhosi waseSwitzerland.
intyatyambo yobomi tattoo isiqingatha semikhono
gquma iitattoo engalweni
I-santa muerte tattoos
namalahle isuti engwevu nezihlangu ezimdaka
v umgca wetatto kubafana
Igumbi elincinci lomgubo wokuhombisa izimvo
Iitatto zikatata nonyana